အောက်တိုဘာလ နှင့် နိုဝင်ဘာလ | Mahasi Sasana Yeik Tha
Submitted by mahasi_editor on Wed, 01/17/2018 - 12:24
(1-10-2017) မှ (30-11-2017) ထိ
၁ ၂-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်မေညွန့် မိသားစု။ ၂၀/၃၂၃၊ သုခမိန်လမ်းသွယ်၊ ရွှေပေါက္ကံ။ ၅၀,၀၀၀
၂ ။ ဦးအုန်းကြိုင် ကောင်းမှု။ ရွှေပေါက္ကံ။ ၁၀,၀၀၀
၃ ။ ဒေါ်ခင်နှင်းလွင် မိသားစု။ ၇၉/က၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၃၀,၀၀၀
၄ ။ ဦးမြင့်ထူး+ဒေါ်အေးအေးဝင်း မိသားစု။ ၃၂၊ ဦးရွှေဂွန်းလမ်း၊ ရေကျော်၊ ပုဇွန်တောင်။ ၂၀,၀၀၀
၅ ၃-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်ကုဏ္ဍလ ကောင်းမှု။ ပါတ်ကျော်ကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၆ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ လှည်းကူး။ ၁၀,၀၀၀
၇ ။ မိဘနှစ်ပါးကို ဦးထပ်ထားလျက် မခင်မာစော (ကျော်-ဖိနပ်ဆိုင်) မိသားစု။ ၄၉/ဒု-ထပ်၊ ရွှေမင်္ဂလာဈေး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဆရာမ ဒေါ်ရင်ရင်မြင့် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၆၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ (ဒု-ကြိမ်) ၁၀,၀၀၀
၉ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဇော်ဇော်နောင်+ဒေါ်မိုးဝါလင်း၊ သား-မောင်ဇော်ဝဏ္ဏ၊ သမီး-မဆုချမ်းမြေ့ဇော် မိသားစု။ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ။ ဒေါ်ဥမ္မာခင် ကောင်းမှု။ ၁၆၉၊ ကင်းဘဲလ်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ၇-၁၀-၂၀၁၇ ဦးမောင်တင်+ဒေါ်ထား တို့အားရည်စူး၍ ဦးအောင်ကြည်+ဒေါ်မြ သားသမီးမြေးမြစ် မိသားစု။ ရုံးဟောင်းလမ်း၊ လှည်းကူးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ ဦးချစ်ခင်+ဒေါ်ခင်လဲ့ဝင်း ၊ သား-ကျော်မင်းသူ မိသားစု။ ၁၂၂/၆ လွှာ၊ ၁၅-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်စီခိုင်လတ် မိသားစု။ ဖားကန့်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၄ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်သစ်ရွှေ+ဒေါ်သဇင်ဦး မိသားစု။ ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးစိုးကျော်လေး+ဒေါ်နန်းလှဝေ မိသားစု။ တိုက်(၁)၊ (၅)လွှာ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ အောင်သပြေလမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ။ မသဲဆုမြတ် မိသားစု။ အမှတ်(၃၀)၊ မြေညီထပ်၊ လသာမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဦးလှသာထွန်း+ဒေါ်အေးမေ (ဒေါ်အေးမေ-အထည်ဆိုင်) မိသားစု။ ရွှေသာလမ်း၊ စစ်တွေမြို့။ ၂,၀၀,၀၀၀
၁၈ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်မြသန်း မိသားစု။ အမှတ်(၈၆၁)၊ ဇာဂလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ တ/ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဌေးအောင်+ဒေါ်သက်သက်မာ မိသားစု။ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ၂၀,၀၀၀
၂၀ ။ ဦးဇေယျာစိုး မွေးနေ့အလှူ။ ၁၀၈၊ မန္တလေးလမ်း၊ ကန်တော်ကလေး။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်အေးဝင်း ကောင်းမှု။ ဘားအံမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ကိုကျော်မိုးလွင်+မတင်တင်လှိုင် မိသားစု။ ၂၄၃၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မခင်ဖြူဖြူဆွေ မိသားစုကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၅၅၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၄ ၂၈-၁၀-၂၀၁၇ ဦးလှသိန်း+ဒေါ်ဇင်မိုးခိုင်၊ သမီး-မ၀တ်ရည်မိုး၊ သား-အောင်ကောင်းခန့် မိသားစု။ ကြောင်နူးကျေးရွာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။ ၂၀,၀၀၀
၂၅ ၁-၁၁-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် မောင်ဖြစ်သူ အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးသန်း ကောင်းမှု။ စက်ရုံလမ်း၊ ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ။ ဒေါ်နုနုစိုး (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) မိသားစု။ အမှတ်(၉၇)၊ ပထမထပ်၊ မလွှကုန်းလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၂၀,၀၀၀
၂၇ ။ ဦးဝင်းဇော်ဝင်း+ဒေါ်ဌေးဌေး မိသားစု။ ၁၄၂၊ သစ္စာလမ်း၊ ၃၉/က ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၈ ၂-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးညွန့်+ မိခင်ကြီး ဒေါ်မြရှင်၊ ခင်ပွန်း ဦးခင်စော၊ သား-ကိုကိုအောင် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်အေး (၈၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ (၆၈/ခ)၊ ပါရမီလမ်း၊ ကေတုမဏရိပ်သာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၄,၀၀,၀၀၀
၂၉ ၃-၁၁-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်ဦး (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်-ငြိမ်း)+ဒေါ်သန်းသန်းစော (သုဓမ္မသိင်္ဂီ)၊ သမီး-ဒေါက်တာ မြတ်မြတ်ဦး၊ သား- မောင်ကျော်ထင်ဦး (U.S.A) မိသားစု။ အမှတ်(၁၃/၅၄)၊ ဇေယျသုခလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၅,၀၀,၀၀၀
၃၀ ၄-၁၁-၂၀၁၇ ဦးအောင်ဝင်း ကောင်းမှု။ ၄၅၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၅,၀၀၀
၃၁ ။ ဒေါက်တာသန်းအောင်+ဒေါက်တာသွယ်သွယ်အောင် သားသမီးမြေး မိသားစု။ ၄၄၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း။ ၃၀,၀၀၀
၃၂ ၅-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်စန်းစန်းနှင့် စကားဝါ မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၄၊ အပိုင်း(၄)၊ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ပေါက်ကုန်းတောင်ပိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ ။ ဒေါ်ဉာဏသီ၊ ဒေါ်တိက္ခဉာဏီ ကောင်းမှု၊ မြိတ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးအောင်ကြည်+ဒေါ်တင်လှ သားသမီးမြေးတစ်စု။ မအူပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၃၅ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ရူပ၀တီ (၆၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ ဒေါ်တင်တင်သိန်းဇရပ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ။ ၃၀,၀၀၀
၃၆ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ဦးမြင့်အောင်+ဒေါ်တင်တင်ညို မိသားစု။ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာရဲအောင်+ဒေါက်တာကေစန္ဒီကျော် မင်္ဂလာဦးအလှူ။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၃၈ ၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှမြင့် အားရည်စူး၍ ဒေါ်စန်းရီ မိသားစု။ ၃၄၄(B)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၂,၀၀,၀၀၀
၃၉ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မိဘများကိုရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ရီ၊ ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစု။ မအူပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်သိန်း+ဒေါ်ကြူဝင်း မိသားစု။ ပျဉ်းမနားမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၁ ။ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဦးဝင်းအောင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်ရီ မိသားစု။ ပျော်ဘွယ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၂ ။ နှစ်ဖက်သော မိဘများအားရည်စူး၍ ဦးမြင့်ဆန်း+ဒေါ်ခင်တင့် မိသားစု။ ဒေါ်ခင်တင့် (၆၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၇)၊ ၃-လွှာ၊ အခန်း-၃/B၊ ၁၆၃-လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးကျော် အားရည်စူး၍ မိခင် ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူနှင့် သားသမီးတစ်စု ကောင်းမှု။ အခန်း(၄၀၃)၊ တာဝါ B၊ မလိခကွန်ဒို ၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ (တတိယအကြိမ်) ၁,၅၀,၀၀၀
၄၄ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ဦးမျိုးမင်းလှိုင်+ဒေါ်ဝတ်ရည်စိုး၊ သမီး-စန္ဒီမင်း မိသားစု။ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ။ ၁၀,၀၀၀
၄၅ ။ ကိုထွန်းထွန်းကျော်+မအေးမြမြထွန်း ကောင်းမှု။ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ။ ၅၀၂/A၊ ဟိုက်ပါတ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၆ ။ ဟိတေသီ စနေတရားပွဲအဖွဲ့ ကောင်းမှု။ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၃,၀၀,၀၀၀
၄၇ ။ GAWU MI OK - Korea ၁၀,၀၀,၀၀၀
၄၈ ။ ဆရာတော်များအားအမှူးထား၍ မိဘ(၂)ပါးအားရည်စူးလျက် မောင်မိုးနိုင် (ဆွမ်းချက်) ကောင်းမှု။ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်။ ၃၀,၀၀၀
၄၉ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာအောင်ကျော်စိုး ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၄၅၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၀ ။ ဒေါ်ခင်စိန်၊ သမီး- မသင်းသင်းယု မိသားစု။ အမှတ်-၅၂၀၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၅၁ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ဘုရားအမ၊ ကျောင်းအမ၊ ရဟန်းမယ်တော် ဒေါ်မေသက်၊ မြေး-ဟိန်းမိုးထက်၊ ဇေယျာထက် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁,၀၀,၀၀၀
၅၂ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁,၀၀,၀၀၀
၅၃ ။ အဖွား ဒေါ်ခမ်းလှိုင်ယဉ် အားရည်စူး၍ ဦးတင်မောင်+ဒေါ်ချိုချိုဌေး မိသားစု ကောင်းမှု။ ၇၇၊အောင်သုခလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ လှည်းကူး။ ၁၀,၀၀၀
၂ ။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်သန်း အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်သောင်း ကိုအမှူးပြုလျက် သမီး-ဒေါ်မိမိခိုင် ကောင်းမှု။ ည/၁၅၊ ဧရာ(၇)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၃ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးအုန်းခိုင်+မိခင် ဒေါ်သိန်းကြည်၊ ခင်ပွန်း-ဦးထိန်ဝင်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်စိုးစိုးသန်း၊ သမီး- မအေးသီခိုင် မိသားစု။ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၄ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း (ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန် မိသားစုများ။ ၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် သုံးရန်) ၉၀,၀၀,၀၀၀
၅ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးပုအိုင် (၂၄)နှစ်ပြည့်၊ မိခင် ဒေါ်မေပု တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးကြိုင် မိသားစု။ အမှတ်-၁၁၈၁(မြေညီ)၊ သမာဓိလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၆ ။ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် အားအမှူးထား၍ ဦးသိန်းထိုက်ဦး(အမှုဆောင်)+ဒေါ်မျိုးမျိုးမင်း (အမျိုးသမီးအဖွဲ့)၊ သမီး- မဇေဇင်ဦး မိသားစု။ ၇၂/A-3၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ (ဦးဟုတ်ယုံ)+ဒေါ်ကျင်လှ၊ သား- Capt ဦးဌေးမြင့် မိသားစု။ အမှတ်(၂၀)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ (ရေကန်တွင်း အခန်းဖြည့်စွက်ငွေ) ၂၀,၀၀,၀၀၀
၇ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးသာရ+ မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်လှ တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးတစ်စုကောင်းမှု။ အမှတ်(၅၁)B၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ (အခန်းဖြည့်စွက်ငွေ) ၁၀,၀၀,၀၀၀
၈ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်ကိုဇော်+ဒေါ်အေးစန္ဒာမြိုင်၊ သား-မောင်ခန့်ဇော်၊ မောင်ခန့်သူ ရွှေနယားကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ၂၅/F/4-A ၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။ (ရေကန်တွင်းဓမ္မာရုံ-တတိယအကြိမ်) ၃၀,၀၀,၀၀၀
၉ ။ ဘိုးဘွား မိဘများအားရည်စူး၍ ဒေါ်စန်းစန်းရင် ကောင်းမှု။ ၂၄၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ကမာရွတ်၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း+ မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ တို့အားရည်စူး၍ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သမီး- ဒေါ်ပွင့်မာခိုင်(ဒု ဥက္ကဋ္ဌ-၂ အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မိသားစုနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ ၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေး အတွက်အသုံးပြုရန်) ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀
၁၁ ၂-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးညွန့်+မိခင်ကြီး ဒေါ်မြရှင်၊ ခင်ပွန်း-ဦးခင်စော၊ သား-ကိုကိုအောင် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်အေး(၈၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၆၈/ခ၊ ပါရမီလမ်း၊ ကေတုမာလာရိပ်သာ။ (ဓမ္မာရုံ) ၁,၀၀,၀၀၀
၁၂ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခိုင်မြင့်ကြူ၊ ညီမ- ဒေါ်ခိုင်လင့်၊ တူမ-နေသန္တာခိုင် မိသားစု။ လှိုင်ရတနာဆောင်၊ မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။ (ဓမ္မာရုံ-ဒုတိယအကြိမ်) ၂,၀၀,၀၀၀
၁၃ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာရဲအောင်+ဒေါက်တာကေစန္ဒီကျော် - မင်္ဂလာဦးအလှူ။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်မိဘများနှင့် ကိုလင်းငယ် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမော် မိသားစု။ မအူပင်မြို့ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ။ ဦးဘိုလှ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်အေး မိသားစု။ မအူပင်မြို့ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် အားအမှူးထား၍ ဦးသိန်းထိုက်ဦး(အမှုဆောင်)+ဒေါ်မျိုးမျိုးမင်း (အမျိုးသမီးအဖွဲ့)၊ သမီး- မဇေဇင်ဦး မိသားစု။ ၇၂/A-3၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ (ဦးဟုတ်ယုံ)+ဒေါ်ကျင်လှ၊ သား- Capt ဦးဌေးမြင့် မိသားစု။ အမှတ်(၂၀)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ (ရေကန်တွင်း အခန်းဖြည့်စွက်ငွေ) ၄၀,၀၀,၀၀၀
၁၇ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း+ မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ တို့အားရည်စူး၍ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သမီး- ဒေါ်ပွင့်မာခိုင်(ဒု ဥက္ကဋ္ဌ-၂ အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မိသားစုနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ ၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေး အတွက်အသုံးပြုရန်) ၂၀၀,၀၀,၀၀၀
၁၈ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ဦးအောင်ကိုဇော်+ဒေါ်အေးစန္ဒာမြိုင်၊ သား-မောင်ခန့်ဇော်၊ မောင်ခန့်သူ ရွှေနယားကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ၂၅/F/4-A ၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။ ၃၀,၀၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်ဌေး ကောင်းမှု။ အမှတ်(၁၅/၁၉)၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမြို့နယ်။ ၁,၁၀,၀၀၀
၂ ။ ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်+မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၁၁၆၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၃ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ကိုသူရဇော်+မ၀င်းဝင်းမြ မိသားစု။ တိုက်(၁၅၉)၊ သမိုင်း(၄)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မချိုနှင်းခင် ကောင်းမှု။ ၁၈၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၅ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ လှည်းကူး။ ၁၀,၀၀၀
၆ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်လပြည့်ဝန်း မိသားစု။ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၂၀,၀၀၀
၇ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ ၄၉၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ယာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၈ ။ ဘိုးဘွားမိဘများအားရည်စူး၍ ဒေါ်စန်းစန်းရင် ကောင်းမှု။ (၂၄)၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၉ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မခင်ဖြူဖြူဆွေ မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၅၅၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်တောင်။ ၅၀,၀၀၀
၁၀ ။ မောင်ဘုန်းမြတ် (၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၄၉၊ ပထမထပ်၊ ၄၈ လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်စုစုဝင်း မိသားစု။ နေပြည်တော် ၁၀,၀၀၀
၁၂ ၁-၁၁-၂၀၁၇ မိခင်နှင့် အစ်ကို ၊ အဖိုးအဖွားတို့အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ၆-၁၁-၂၀၁၇ မသဲနေဇာစိုး ကောင်းမှု။ ၂၅၅၊ ပုလောလမ်း၊ ၁၈-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်သန်းသန်းအေး ကောင်းမှု။ (အင်္ဂလိပ်စာဌာန) ၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၁၃-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်စန်းရီနှင့် မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု။ B/5၊ နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၁၆ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်သိန်း+ဒေါ်ကြည်ဝင်း၊ သမီး-ရတနာလှိုင် မိသားစု။ ပျဉ်းမနားမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာရဲအောင်+ဒေါက်တာကေစန္ဒီကျော် မင်္ဂလာဦးအလှူ။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ညွန့်ရွှေ၊ ဒေါ်ညွန့်မေ ကောင်းမှု။ ဗန်းမော်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၉ ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများကို ရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ ၄၉၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၀ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ဇောင်ချမ်းတောင်ရွာ၊ ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည်မဟာစည်ရိပ်သာ၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ။ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်-၂၁၇၊ အခန်း (၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ ၃၀,၀၀၀
၂၂ ၃၁-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မချိုနှင်းခင် ကောင်းမှု။ ၁၈၊ ဈေးကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၂ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ လှည်းကူး ၁၀,၀၀၀
၃ ။ ဖြူး-မိသားစု။ ၅၈/က၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ ၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်မိမိခင် (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၃၀/၁၆၇၊ တောင်ထိပ်ပန်းလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ (ပစ္စည်းလေးပါး) ၁၀,၀၀၀
၅ ၂၄-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဘသာ+ဒေါ်ခင်ကြည် မိသားစု။ ဆားမွန်ရွာ၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။ ၃၀,၀၀၀
၆ ၄-၁၁-၂၀၁၇ ဖြူး-မိသားစု။ ၅၈/က၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၇ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ မောင်ထက်လင်းမောင် ကောင်းမှု။ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇ မောင်ရဲမင်းဆန်း (၂၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ (၂၅-၁၁-၂၀၁၇)။ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ။ ၁၀,၀၀၀
၉ ။ မောင်လင်းထွဋ်ဝင်း+ဒေါက်တာနှင်းလဲ့ရည်ကျော် - မင်္ဂလာဦးအလှူ။ အမှတ်(၁၈)၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၀ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာရဲအောင်+ဒေါက်တာကေစန္ဒီကျော် - မင်္ဂလာဦးအလှူ။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
နာယကဆရာတော် (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) ဘဒ္ဒန္တသူရိယ "အလှူတော်မင်္ဂလာ" သာသနာမာမကကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။
ဦးအေးကျော်+ဒေါ်သန်းသန်းဝေ မိသားစု။ ၅၃၄/၅၃၅၊ (၅-လွှာ)၊ ၀ဏ္ဏသိင်္ဂီလမ်၊ မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေ။
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသောဘန (ရွှေမင်းဝံ) ဆရာတော်ကြီး၏ "၀ိဇာတအလှူမင်္ဂလာ" ရွှေမင်းဝံကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဒေါ်စိန်စိန်ရီ "မွေးနေ့အလှူ" ၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၂၀)၊ ရွှေဂုံတိုင်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်စိန်အိ အားအမှူးထားလျက် မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးစန်းရှု+ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ မိသားစု။ န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာ။
Capt လင်းဇော်ဝင်း အားရည်စူး၍ ဖခင် ဦးဇော်ဝင်း ကောင်းမှု၊ J/ ၅၀၊ ရွှေနှင်းဆီ(၂)လမ်း၊ FMI City
မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား-မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၆)၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။
ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင် "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးမျိုးညွန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင်၊ သား-ဇွဲနိုင်အောင် မိသားစု။ ၇၉၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။
ဒေါ်ခင်တင့် နှင့်မောင်များ၊ ဦးတင်အုန်း၊ ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်အုံးကျင် တို့အားရည်စူး၍ တူမ- ဒေါ်စန်းရင်မေ၊ မြေး-ဒေါ်ခင်အေးရီ၊ မ၀င်းလဲ့ရွှေရည် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၄၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။
မမေဖူးပွင့်(ခ) မဖူးပွင့်သင်း "အမည်ပြောင်းနှင့် မွေးနေ့အလှူ"၊ အမှတ်-၂/၄(A)၊ ဇေယျာလမ်း၊ ကမာရွတ်။
BANJU SUNIM, SEKYUNG SUNIM, LEE YEON LIN CHO SO YUNG KOREA YOGIS, MAY YOU BE HAPPY, HEALTHY FCEE FOROM SUFFERING
(ဦးအင်းယား)+ဒေါ်မြင့်ကြည် "ပုသိမ်ရွှေဥဒေါင်း -ရွှေဆိုင်" မိသားစုကောင်းမှု။ အမှတ်(၉၀)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
PRESIDENT LIM KIMBEN, ADDOT LAM KIMMINH VEN. LIM CHRPPIN, VIPASSANA BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION OF WAT SEREY CHINA, AUSTRALIA INC, MELBOIRNE
(ဦးခိုင်စိုး) ၇-နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်မိုးစန္ဒာ၊ သမီး-ခင်စပယ် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၆)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ စမ်းကြီးဝ၊ မင်္ဂလာဒုံ။
ဒေါ်ရှုကြူ (၁)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၁၅)၊ သံတမန်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်မြရင် (၂၂)နှစ်ပြည့်၊ ဖခင်ကြီး ဦးဟန်စော၊ ဖခင်ကြီး ဦးဟောင်ငါး+မိခင်ကြီး ဒေါ်ငွေကြည် တို့အားရည်စူး၍ ဦးတင်ဝင်း (တွဲဖက်-အတွင်းရေးမှူး) ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်+ ဒေါ်မြမြအိန် (အမှုဆောင်-အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) ကောင်းမှု။ အမှတ်(၃၈၈)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
"သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ" ဦးဇော်မင်း+ဒေါ်လှလှအေး မိသားစု။ တိုက်(၁၂)၊ အခန်း(၁၆)၊ ဝေဠုဝန်အိမ်ရာ၊ စမ်းချောင်း။
ဒေါ်ကျင်ပု "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးတင်အောင်+ဒေါ်ကျင်ပု "စံပြ-ရွှေဆိုင်" မိသားစု။ အမှတ်-၁၅၊ ဗိုလ်ချိုလမ်း၊ အင်ကြင်းမြိုင်လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ ဗဟန်း။
စိန်ကျော်မိုး "၄၂-ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ" ဦးကျော်ငြိမ်း+ဒေါ်နုနုစိန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၉(မြေညီ)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
ဦးတင့်လွင် "မွေးနေ့အလှူ" ဦးတင့်လွင်+ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၃၃)၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း။
ဖိုးဖိုး စည်သူဦးညီပုနှင့် နှစ်ဖက် ဘိုးဘွားများကို အမှူးထား၍ ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုထွေး "၅၅" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ၊ ဒေါက်တာဦးစိုးပိုင်+ဒေါက်တာဒေါ်နုနုထွေး၊ သမီး-ဒေါက်တာစိုးသီတာ၊ သား- မောင်သန့်စင်ဦး မိသားစု။ အမှတ်- T-3 ၊ ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန်၊ သုဝဏ္ဏ။
အကယ်ဒမီ ဦးရဲအောင် "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား- မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၆)၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်။
(ဦးရဲအောင်မင်း) ၅-နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း မိသားစု။ အမှတ်-၃၁/B၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖခင် ဦးသန်းတင်+မိခင် ဒေါ်ခင်သန်းတင် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်ခင်မာတင်၊ ဒေါ်ခင်ချိုတင်၊ သား-ဦးအောင်အောင်တင်+ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ မြေး- မောင်သီဟထွဋ်စံ မိသားစု။ တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(၀၁)၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ ရန်ကင်း။
မိခင် ဒေါ်မြနှစ် (၂)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၁၆/က)၊ ဆေးရုံလမ်း၊ သန်လျင်မြို့။
AMDLID DANG+ CONNIE DANG , WASHINGTON DC, U.S.A
ဒေါ်ရှယ်ရီစိုး "၆၆"နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၃၅)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။
GAN HOOI KIM , MALAYSIA
ဦးထွန်းလင်း+ဒေါ်အေးအေးရီ တို့၏သား မောင်ကျော်ထွန်းအေး (၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၃၉၆)၊ ၁-လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။
မကြည်သာခင်ဇော် "မွေးနေ့အလှူ" ၊ အမှတ်-၁၂၊ အင်းလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။
နီပေါဆရာတော် ဦးမုဏ္ဍိတ ကောင်းမှု
ကိုဝင်းနိုင်ဦး+မအေးအေးမိုး တို့၏ "၂၀ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ" ၊ အမှတ်-၁၆/4-A၊ သရက်တောလမ်း၊ စမ်းချောင်း။
မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်အုံး ကောင်းမှု။ ဒေါ်ထွေးထွေးဇရပ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။
သွန်းဆင့်အိမ်(ခ) IVANNA (၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ ခြံ-၂၀/D ၊ နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်း၊ ကုက္ကိုင်း၊ ဗဟန်း။
ဦးကျော်ဝင်းနိုင် ၄၅-နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၁)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။
ဦးရန်သိမ်း "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးရန်သိမ်း+ဒေါ်မေ၀င်းခိုင်၊ သား-ချိုးတချိုင်၊ ချိုးတပေါင် မိသားစု။ အမှတ်(၁၁၀/A)မြေညီ၊ အထက်မဟာသုခလမ်း၊ ကျီတော်ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်။
ဦးလွင်မောင် "၅၀"နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ ၄၈၊ အသောကလမ်း၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ တာမွေ။
မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း (၅)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ သား-ဦးမိုးဟိန်း၊ သမီး-ဒေါက်တာ ဖြူဖြူလေး မိသားစုကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၄/B ၊ ၂၇-ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံ(၂)၊ မြောက်ဒဂုံ။
ဒေါက်တာ ရဲအောင်+ဒေါက်တာ ကေစန္ဒီကျော် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။
ဦးဝင်းကြိုင်+ဒေါ်ကြည်ထွေး "မွေးနေ့အလှူ" ၊ အမှတ်-၆၉/၅-လွှာ၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ အလုံ။
စိန်ကျော်မိုး "၄၃-ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ" ဦးကျော်ငြိမ်း+ဒေါ်နုနုစိန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၉(မြေညီ)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
ဒေါက်တာ ရတနာ "မွေးနေ့အလှူ" ၊ တိုက်အမှတ်-၃၊ အခန်း-၃၀၊ ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။
LOAN NEO OBRIE'S PHAR MACY, AUSTRALIA
ဒေါက်တာ ကျော်နိုင်ထွန်း+ဒေါက်တာ မျိုးမျိုးဟန် "၂-နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ" ၊ အမှတ်-၁၁၄၊ လမ်း-၅၀၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
TEO SIANO EC & FAMILY , MALAYSIA
မခင်အင်ကြင်း (၁၀)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်-၄၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဆရာစံမြောက်/အနောက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
"တတိယအကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်း" ကိုထွန်းထွန်းကျော်+မအေးမြမြထွန်း၊ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ။ ၅၂၀/A ၊ ဟိုက်ပါတ်လမ်း၊ အင်းစိန်။
ဦးမောင်ဟန် (၃၂)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်စောမြ၊ ဒေါ်သန်းရီ မိသားစု။ ၆၅၉/D ၊ မြကန်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်။
မောင်အောင်ဘုန်းမြတ် "၁" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ ၁/၂၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ အင်းစိန်။
ဦးသောင်းရွှေ+ဒေါ်ခင်ဆွေဦး "၁၁- ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်း" ၊ သား-မောင်ဖြိုးဟန်၊ မောင်ရွှေဖြိုး၊ မောင်ဝေဖြိုး+မမွန်မွန်ခေါင်၊ မြေး-စနိုး၊ စမိုင်း၊ သမီး- မရွှေဟင်တင့်တယ် မိသားစု။ မြောက်ဥက္ကလာပ။
ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဣန္ဒ (ဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) Ph.D (Buddhism) နှင့် America Burma Buddhist Association, New York, U.S.A
ဦးစိန်ဟုတ်+ဒေါ်စိန်သန်း "၂၈ " ကြိမ်မြောက်အလှူ ၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။
၁ ၁-၁၀-၂၀၁၇ နာယကဆရာတော် (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) ဘဒ္ဒန္တသူရိယ "အလှူတော်မင်္ဂလာ" သာသနာမာမကကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။ ၁၄,၇၀,၀၀၀
၂ ၂-၁၀-၂၀၁၇ "သီလရှင်ဝတ်ပွဲအလှူ" T& H MATHS, CENTRE မိသားစု။ တိုက်(C) ၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ပ-ထပ်၊ DELTA: LAZAR ရွှေဂုံတိုင်။ ၇,၃၀,၀၀၀
၃ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးအေး+ဒေါ်ခင်အေးသက် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု။ ၅/D ၊ ယုဇနလမ်း၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၉,၇၅,၀၀၀
၄ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသောဘန (ရွှေမင်းဝံ) ဆရာတော်ကြီး၏ "၀ိဇာတအလှူမင်္ဂလာ" ရွှေမင်းဝံကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၄,၃၆,၀၀၀
၅ ၅-၁၀-၂၀၁၇ 97 - T.T.C သူငယ်ချင်းများကောင်းမှု ၅,၀၇,၈၀၀
၆ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ကိုတေဇာဝင်း+မအိအိဖြိုး "မင်္ဂလာဆွမ်းအလှူ" အမှတ်-၁၀၂၁(က)၊ မင်းတပ်(၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံ။ ၂၄,၁၆,၀၀၀
၇ ၇-၁၀-၂၀၁၇ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်လှ "၆၆" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ၊ မကေခိုင် "၃၁"နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ။ ဇ/၂၊ ဦးလွန်းမောင်လမ်း၊ (၇)မိုင်၊ မရမ်းကုန်း။ ၆,၅၅,၀၀၀
၈ ၈-၁၀-၂၀၁၇ "၆၈" ကြိမ်မြောက် ဘုံကထိန်လျာသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲ ၁၉,၇၇,၀၀၀
၉ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ကိုကျော်စွယ်စုံ+မပုံ့ပုံ့ မိသားစု။ အမှတ်-၁၇၈၊ ၀ါးတန်းလမ်း(အပေါ်)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၆,၆၈,၀၀၀
၁၀ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ "ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာ" နှစ်ဖက်မိဘများအမှူးထား၍ ဦးညီညီကျော်+ဒေါ်လွင်နှင်းနှင်း၊ သား-မောင်သန့်ကျော်ဆက်၊ သမီး- မရွှန်းလဲ့မေ မိသားစု။ အမှတ်(၁၁၃)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၈,၇၉,၀၀၀
၁၁ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ (ဒေါ်ကျင်စိန်) အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု။ A-G-1/E ကွန်ဒို၊ ဈေးမြောက်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၃,၆၈,၀၀၀
၁၂ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာစည်သူဟိန်း+ မနန်းသပြေ၀င်းမြင့် ကောင်းမှု ။ အမှတ်-၁၀၂(A-1)၊ ဝေပုလ္လအိမ်ရာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၂၀,၅၃,၀၀၀
၁၃ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးကျော်စိုးဝင်း "မွေးနေ့" နှင့် သမီး-ငြိမ်းအိအိခိုင် "မွေးနေ့" အလှူ ။ ခြံ(၉)၊ မလိခ-၃ လမ်း၊ (၇)မိုင်၊ ပါရမီ။ ၇,၅၃,၀၀၀
၁၄ ၁၄-၁၀-၂၀၁၇ ကိုနိုင်အောင်+ မအိခိုင် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၁၈)၊ မြင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၂၁,၁၆,၀၀၀
၁၅ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇ ကိုသူရအောင်+မအေးအေးတူး တို့၏သား၊ မောင်ရှိန်းထက်အောင် (၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နှင့် အမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်အလှူ ။ No.3, TOSTA AVENUE သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၂,၈၄,၀၀၀
၁၆ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မမေသဉ္ဇာကျော် (၂၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ၊ အမှတ်(၉)၊ ဘလောက်(၅၁)၊ န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာ။ ၆,၄၅,၀၀၀
၁၇ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ကိုမြတ်သူအောင်+မမြင့်သိင်္ဂီ "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၆)၊ ၁၃၉-လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေ။ ၂၂,၃၀,၀၀၀
၁၈ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ရှုကြူ (၁)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၁၅)၊ သံတမန်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၆,၉၇,၀၀၀
၁၉ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးမင်းတူးတူး "မွေးနေ့အလှူ" ၊ ဦးမင်းတူးတူး+ဒေါ်သီသီထွန်း၊ သမီး-ယွန်းယမုံမင်း၊ သား-ဇွဲသူရိန်မင်း၊ ၇၇/၇၀ (E-2) ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၈,၀၇,၀၀၀
၂၀ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ သမီး-မရွန်တာထူး အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာဦးရွှေထူး မိသားစု။ ၁၄၂၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၇,၁၅,၀၀၀
၂၁ ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ မောင်ထက်ရန်နိုင်စိုး+မဖူးပွင့်ဝဿန် "မင်္ဂလာဆွမ်းအလှူ" ၊ အမှတ်(၃၂)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၂)၊ FMI CITY လှိုင်သာယာ။ ၂၀,၂၂,၀၀၀
၂၂ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ကိုအောင်ဆန်းဝင်း+မသဉ္ဇာကိုကို "မင်္ဂလာဆွမ်းအလှူ" ၊ တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(၁)၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်။ ၁၉,၇၇,၀၀၀
၂၃ ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ လ၀န်းအိမ်(ခ) MICHELLE "၁" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ တိုက်(၄၀)၊ အခန်း (၁၀၁)၊ စကားဝါလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၂,၄၁,၀၀၀
၂၄ ၂၄-၁၀-၂၀၁၇ သခင်သိန်းဖေ (၀ါးခယ်မ) (၁)နှစ်ပြည့်ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၃)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၄,၁၄,၀၀၀
၂၅ ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဟိန်းရာဇာ+ဒေါက်တာရွှေစင်မိုး "မင်္ဂလာဆွမ်း"၊ အမှတ်(၃)၊ TOSTA ANGNNE မင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၂,၇၉,၀၀၀
၂၆ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ဖိုးဖိုး စည်သူဦးညီပု နှင့် နှစ်ဖက်ဘိုးဘွားများကို အမှူးထား၍ ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုထွေး (၅၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ၊ ဒေါက်တာဦးစိုးပိုင်+ဒေါက်တာဒေါ်နုနုထွေး၊ သမီး- ဒေါက်တာစိုးသီတာ၊ မောင်သန့်စင်ဦး မိသားစု။ အမှတ်-T-3 ၊ ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၆,၀၅,၀၀၀
၂၇ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာနေလင်းဦး+ဒေါ်စပယ်ဖြူ တို့၏သမီး ဆောင်းဦးငယ် (၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့။ အမှတ်(၅၁)၊ ညောင်တုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၇,၁၉,၀၀၀
၂၈ ၂၈-၁၀-၂၀၁၇ (ဦးရဲအောင်မင်း) (၅)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း မိသားစု။ အမှတ်-၃၁/B၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၆,၃၁,၀၀၀
၂၉ ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ မောင်ဟိန်းထွန်းဦး+မဖူးပွင့်ဝေလှိုင် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ ၂၅၊ ၁၅၃-လမ်း၊ တာမွေ။ ၂၁,၇၀,၀၀၀
၃၀ ၃၀-၁၀-၂၀၁၇ LUNCH DONATION 2/2017 , VEN. KHIPPA PYANNO, JETAVANA VIHARA WASHINTON D.C., U.S.A ၅,၁၂,၀၀၀
၃၁ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်ဇော်+ဒေါ်ခင်မေ၀င်း၊ သမီး-ချမ်းမြေ့ဝတီဇော် (၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်-၄၃၊ ကျွန်းတော်လမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၇,၄၇,၀၀၀
၃၂ ၁-၁၁-၂၀၁၇ ကိုအလေးဖာ+မမူမူခင် "မင်္ဂလာဆွမ်းအလှူ" ၊ အမှတ်-၆၉၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၄,၉၅,၀၀၀
၃၃ ၂-၁၁-၂၀၁၇ ကိုဝင်းမင်းသန်း+မမာလာဝင်း "မင်္ဂလာဆွမ်းအလှူ" ၊ အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၂၀၂)၊ ပုဇွန်တောင်ဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂၅,၄၃,၀၀၀
၃၄ ၃-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခေမာထေရီ (ချမ်းမြေ့မဂ္ဂင်မဟာစည်)၏ (၈၀)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ ပုသိမ်ကြီး၊ ရေထွက်တောင် မန္တလေး။ ၈,၂၉,၀၀၀
၃၅ ၄-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာသိန်းဦး+ဒေါ်နယ်လီရောင်း မိသားစု။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ။ ၆,၉၀,၀၀၀
၃၆ ၅-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာမင်းသူ+ဒေါ်ဟေဇာမြင့်ဦး သမီး မွေးနေ့အလှူ ၊ ၉၂/ A ၊ ကုက္ကိုင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၂,၇၁,၀၀၀
၃၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကျော်မြင့်+ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း "မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဆွမ်းအလှူ" ၊ ၃၁၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ (၅-လွှာ)၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၆,၃၉,၀၀၀
၃၈ ၈-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာသူရရှိန်+ဒေါက်တာထူးထူးအောင် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်-B-9 ၊ ကမ်းသာယာအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံ။ ၁၆,၇၇,၀၀၀
၃၉ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ ဦးမြသောင်း "၈၅" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၄၂/က)၊ ဗောဓိရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂) ဗဟန်း။ ၁၇,၅၆,၀၀၀
၄၀ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇ မောင်လင်းထွဋ်ဝင်း+ဒေါက်တာနှင်းလဲ့ရည်ကျော် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၁၈)၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ မြေနီကုန်း။ ၁၆,၃၇,၀၀၀
၄၁ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ ကိုထက်အောင်လင်း+မစကားဝါ "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၄)၊ သိဒ္ဓိလမ်း၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၇,၄၄,၀၀၀
၄၂ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ HYERIM KOREA BHIKKHUNI KOREA ၆,၈၀,၀၀၀
၄၃ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ မောင်ခင်ဇော်ထွန်း+မခင်ဆွေလင်း "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၃၈)၊ ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဗဟန်း။ ၁၅,၀၇,၀၀၀
၄၄ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ ရဲလင်းထိုက်+မအေးယုမွန် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ အမှတ်(၁၁၆)၊ သုနန္ဒာလမ်း၊ ရွှေဝတ်မှုံရိပ်သာ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၂,၈၁,၀၀၀
၄၅ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ ရဲအောင်+ ဒေါက်တာ ကေစန္ဒီကျော် "မင်္ဂလာဆွမ်း" ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၂၁,၄၄,၀၀၀
၄၆ ၁၈-၁၁-၂၀၁၇ မောင်မိုးဇော်အေး(ခ)ဖိုးသကြား+မဆွေဆွေဝင်း "မင်္ဂလာဆွမ်း" အမှတ်(၁၄) (၃-လွှာ/B)၊ သိမ်ကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၆,၁၄,၀၀၀
၄၇ ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ ကိုနေလင်းကိုကို+မနန်းဟေမာထွေးညွန့် "မင်္ဂလာဆွမ်း" အမှတ်(၄၉/၅၃၈)၊ ပုန်းညက်မြိုင်လမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၂၁,၄၄,၀၀၀
၄၈ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်စိုး "၈၀" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ ၁၂၇/၁၂၉၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၉,၆၈,၀၀၀
၄၉ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ LOAN NEO OBRIE'S PHAR MACY AUSTRALIA ၉,၂၀,၀၀၀
၅၀ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်+မယုမို့မို့လွင် "မင်္ဂလာဆွမ်း" အမှတ်-၁၀/၁၁၆၊ ခေမာသီ(၄)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၂၂,၀၀,၀၀၀
၅၁ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ကိုဖြိုးေ၀၀င်း+မနဒီခင် တို့၏သား မောင်ဝေဖြိုးသွင် ရက် "၁၀၀" ပြည့်မွေးနေ့ ၊ အမှတ်(၆)၊ နာနတ်တောလမ်း၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်။ ၈,၃၆,၀၀၀
၅၂ ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်စွမ်းကြူး၊ သား-ဦးဝင်းထိန်+ဒေါ်ရတီချောင် မိသားစု U.S.A ၄,၃၀,၀၀၀
၅၃ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး (ဒေါ်အင်း) (၁)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ သား-ဦးသိန်းစိုး+ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မြင့်၊ မြေး-မောင်မြတ်ကောင်းခန့်၊ မအိမ်ငွေခြယ်စိုး မိသားစု။ ၃၆/ပ-ထပ်၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ မြေနီကုန်းစမ်းချောင်း။ ၁၁,၃၁,၀၀၀
၅၄ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးအေးမောင်+ဒေါ်ကျင်စု တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးများ ကောင်းမှု။ ၉၅/ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ လသာ။ ၁၁,၃၃,၀၀၀
၅၅ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ကိုနန္ဒကျော်ခိုင်စိုး+မသီတာထွေး၊ သား-မောင်မြတ်သူရဟိန်းဇော် မိသားစု။ အမှတ်-၂၇/H ၊ (၇-လွှာ)၊ ၅၅-လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၂၈,၅၇,၀၀၀
၅၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ၀ါဆိုကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ိမလ နှင့် တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ ကောင်းမှု။ ကြို့ပင်ကောက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၂၉,၄၆,၀၀၀
၅၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ "၆၃" ကြိမ်မြောက် ဆွမ်းအလှူ ၊ ဦးမောင်စိန် မိသားစု ၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၃,၀၉,၀၀၀
မဟာစည်တရားတော်ပြန့်ပွားရေး ထာဝရငွေပဒေသာပင် အလှူရှင်များ
၁ ၁-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်+မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေး မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၁၆၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၂ ။ ဗိုလ်ကြီး ဥက္ကာကျော် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅၆၄)၊ ရေနံချောင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၅,၀၀၀
၃ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်စမ်းဝင်း၊ သမီး-မရွှေသင်္ကြန်၊ ရွှေဟေမာန် မိသားစု။ (၁၀၆)၊ လမ်းမတော်၊ ပြည်မြို့။ ၂၀,၀၀၀
၄ ။ ဒေါက်တာလှမင်း+ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် မိသားစု။ ၉၇၊ ၂၇-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း။ ၃၀,၀၀၀
၅ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မိခင်နှင့်အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၆ ၆-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့်အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု၊ လှည်းကူး။ ၁၀,၀၀၀
၇ ။ ဒေါ်တင်မိုးအေး - ကထိက၊ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၈ ။ ဦးလှသောင်း+ဒေါ်စန်း မိသားစု။ ဆန်အိတ်ကြီးရွာ၊ ၀ါးခယ်မမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၉ ။ ဒေါ်ဥမ္မာ ကောင်းမှု။ ၆၇၂၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးစိုးသိန်း+(ဒေါ်သိန်းစိန်) သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၁၂/စီ၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)၊ ဗဟန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၁ ။ ဦးလှိုင်ထွန်း+ဒေါ်ဟန်ရင်၊ အဒေါ်-ဒေါ်စန်းတင် တို့အားအမှူးထား၍ သမီး-မနန္ဒာသီရိ ကောင်းမှု။ ဘိုကလေးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ မိဘ ဘိုးဘွားများကိုရည်စူး၍ ဒေါ်ထွေးထွေးအေး ကောင်းမှု။ ၂၄၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ရီရီဆွေ ကောင်းမှု။ ၂၃၊ ဇမ္ဗူရစ်လမ်း၊ ပတ္တမြားမြို့သစ်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၅,၀၀၀
၁၄ ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်ပွင့်+ဒေါ်မြိုင်၊ သား-ဦးဘသွင်+ဒေါ်ငွေမြင့်၊ မြေး- ဦးမောင်မြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး မိသားစု။ မဟာဓမ္မိကာရာမ(ရွှေကျင်) ကျောင်းတိုက်အနီး၊ ရုံးသပြေကန်ကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ။ ဦးသိန်းမောင်+ဒေါ်ငွေသက်၊ သား-ဦးဟုတ်ဝမ်+ဒေါ်အုံးကြည် မိသားစု။ (၇၂၀/ခ)၊ မြို့မလမ်း၊ ၁၂/၃၄ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၇ ဦးဝင်းဇော်ဝင်း+ဒေါ်ဌေးဌေးသက် မိသားစု။ အမှတ်-၁၄၂၊ သစ္စာလမ်း၊ ၃၉/က ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၇ ။ မိခင်နှင့်အစ်ကို အဖိုးအဖွားများအား ရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာရဲအောင်+ဒေါက်တာကေစန္ဒီကျော် -မင်္ဂလာဦးအလှူ ။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ။ ဦးဘဌေး+(ဒေါ်ကြူကြူ) မိသားစု။ တိုက်(၂၀၈/၂၀၉)၊ ပထမထပ်(B)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဆင်မလိုက်၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးစိန်+ဒေါ်သန်း တို့အားရည်စူး၍ သား-ဦးသိန်းဇော် ကောင်းမှု။ နတ္တလင်းမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသန်းဝင်း+ဒေါ်မြဝေ မိသားစု။ ၆၄၊ ရေကျော်၊ ပုဇွန်တောင်။ ၅,၀၀၀
၂၂ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကျော်+ဒေါ်ညိုအိ မိသားစု။ မကွေးမြို့ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးကျော်မြင့်သန်း (ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက) ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်၊ မဟာစည်။ ၅,၀၀၀
၂ ။ ဒေါက်တာ လှမြင့်အောင် အားရည်စူး၍ ဇနီး - ဒေါ်သန်းသန်းစည်နှင့် သားသမီးမြေးများ။ အမှတ်(၁၀)၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၅,၀၀၀
၃ ။ ဦးစံထူး (အတွင်းရေးမှူး-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်+ဒေါ်ခင်နုရီ မိသားစု။ အမှတ်(၁၂)၊ ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅,၀၀၀
၄ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာထွန်းလင်း (နာယက) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၅ ။ ဒေါက်တာကျော်ဝင်း (နာယက) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၆ ။ ဒေါက်တာမြင့်သောင်း (နာယက) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၇ ။ ဒေါက်တာညွန့်လွင် (နာယက) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၈ ။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအုန်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၉ ။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်တင်အောင် (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၀ ။ ဒေါက်တာ အောင်မြတ် (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၁ ။ ဒေါက်တာ စံသာဟန် (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၂ ။ ဒေါက်တာ လှမြင့် (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၃ ။ ဒေါက်တာ ခင်ဦးမြင့် (အတွင်းရေးမှူး) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၄ ။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြမြအုန်း (ဘဏ္ဍာရေးမှူး) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၅ ။ ဒေါက်တာ ကြည်မေသိန်း (တွဲဖက်-အတွင်းရေးမှူး) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၆ ။ ဒေါက်တာ သန်းဝင်း (တွဲဖက်-အတွင်းရေးမှူး) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၇ ။ ဒေါက်တာ ခင်မျိုးမြင့် (စာရင်းစစ်) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၈ ။ ဒေါက်တာ ဦးမင်းဆွေ (အဖွဲ့ဝင်) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၁၉ ။ ဒေါက်တာ ဦးဘရွှေ (အဖွဲ့ဝင်) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၂၀ ။ ဒေါက်တာ ခင်ခင်ထွေး (အဖွဲ့ဝင်) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၂၁ ။ ဒေါက်တာ ရီရီမြင့် (အဖွဲ့ဝင်) မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ၃,၀၀၀
၂၂ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးဥတ္တရ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ပဓာနနာယကဆရာတော်၊ ဓမ္မိကာရုံမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ သန်လျင်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁ ၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးကိုကိုလင်း+ဒေါ်နွယ်နီဟန်၊ သမီး-မယွန်းမမလင်း၊ မနှင်းသွေးဥ မိသားစု။ အမှတ်-၆၀/ခ၊ ၂-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၂ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးတင်လှိုင်+ဒေါ်သန်းသန်းမေ မိသားစု။ နေပြည်တော် ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃ ၅-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်တင်ရီ မိသားစု။ အမှတ်-၃၊ ၁၀၅-လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄ ။ ဦးတင်အောင်+ ဒေါ်ပွဲဝင်း မိသားစု။ အမှတ်-၃၊ ၁၀၅-လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅ ။ မမိုးပွင့်ဖြူ ကောင်းမှု။ ခေတ္တ-ဂျပန် ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆ ။ ဒေါ်ဥမ္မာ ကောင်းမှု။ ၆၇၂၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၇ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဇော်ဇော်နောင်+ဒေါ်မိုးဝါလင်း၊ သား-မောင်ဇော်ဝဏ္ဏ၊ သမီး-မဆုချမ်းမြေ့ဇော် မိသားစု။ ရန်ကုန်မြို့ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၈ ၇-၁၀-၂၀၁၇ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ ၅၈၅၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၉ ။ ဦးအောင်ကျော်ငြိမ်း U.S. A ကောင်းမှု ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ။ စင်စုမြတ်(ခ)စုကျော်ငြိမ်း U.S. A ကောင်းမှု ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ။ Shanky U.S. A ကောင်းမှု ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ Imo U.S. A ကောင်းမှု ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ။ မဏိရတ် U.S. A ကောင်းမှု ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ။ မဧကရီမိုးမြင့် ကောင်းမှု။ ၁၅၄၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်စိန်မြ မိသားစု။ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ။ ဦးချင်မွန် မိသားစု။ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဦးချောမောင် ကောင်းမှု။ ၂၁၉၈၊ ဇေယျဝတီလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ။ ဦးညွန့်ဝင်း+ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်၊ သမီး-ဒေါက်တာငြိမ်းကေခိုင်၊ သား-မောင်ငြိမ်းချမ်းမောင် မိသားစု။ ၄/ ပဒေသာလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ။ အဖိုးအဖွား များအားရည်စူး၍ မြေး-မမြကြူသင်း (၂၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၈၇၊ လမ်း-၂၀၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၀ ။ မသဲဆုမြတ် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၀၊ လသာလမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်လှမော် သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃၀/ ဦးရွှေဂွန်းလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးစိုးကျော်လေး+ဒေါ်နန်းလှငွေ မိသားစု။ တိုက်(၁)/၅-လွှာ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ အောင်သပြေလမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဦးဝင်းညွန့်အောင်+ဒေါ်မာမာကျော်၊ သမီး-ဖူးပွင့်သင်း မိသားစု။ အမှတ်-၂/၄၊ ဇေယျာလမ်း၊ ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၄ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးကြည်မြ အားရည်စူး၍ ဒေါ်သောင်းကြည် မိသားစု။ ၉/၆၉၂၊ ရွှေပဒေသာလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၅ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ သမီး-မမြင့်မြင့်ဝင်း ကောင်းမှု။ ၉/၆၉၂၊ ရွှေပဒေသာလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဇေယျာစိုး မွေးနေ့အလှူ ။ ၁၀၈၊ မန္တလေးလမ်း၊ ကန်တော်ကလေး။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်အောင်၊ ဒေါ်ခင်သန်း (အောင်ဘရားသား) မိသားစု၊ မုံရွာမြို့။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၂၈ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးကြိုင်သင်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်လှအေး မိသားစု။ တိုက်(၈)၊ အခန်း(၂၁)၊ လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ယာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၂၉ ။ ဦးလှိုင်လင်း+ဒေါ်မွန်မွန်အေး၊ သမီး-မခင်ပြည့်စုံလှိုင်၊ သား-မောင်ဇင်ထက်အောင် မိသားစု။ တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(၃၂)၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ ကမာရွတ်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၃၀ ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ မောင်ကျော်ဇော်+မခိုင်ခိုင် (အထည်ဆိုင်) စစ်တွေမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၁ ။ ဦးခင်မောင်သန်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်စိန်၊ သား-ပြည့်ဖြိုးကိုကို မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၊ ငုဝါလမ်း၊ သန်လျင်တံတားဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ သာကေတ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၂ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ အရှင်ပညာစက္က ကောင်းမှု၊ ဆိပ်ခွန်ရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၃၃ ။ မောင်ဇော်နိုင်ထွေး ကောင်းမှု၊ အမှတ်-၁၁၆၁၊ မြပုလဲသွယ်လမ်း၊ ၅၇-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မခင်ဖြူဖြူဆွေ မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၅၅၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်တောင်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၃၅ ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်တင်ရီ၊ ဒေါ်ကျင်သိန်း၊ ဦးထွန်းဦး၊ ဒေါ်တင်ကြည် မိသားစု။ အမှတ်-၁၁၃၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ လသာမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၆ ။ ကိုဇင်မောင်ထွန်း+မစိမ်းမို့မို့သန်း မိသားစု။ တောင်ဥက္ကလာပ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ။ ဦးညီညီ+ဒေါ်ခင်ခင်စိန် တို့အားရည်စူး၍ ဗိုလ်မှူးအောင်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ဇာညီ၊ ဒေါ်ယမင်းညီ မိသားစု။ ဒေါပုံ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၈ ၃-၁၁-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးကို ရည်စူး၍ မချိုချိုမာ မွေးနေ့အလှူ နှင့်မောင်နှမတစ်စုကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၄၅၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ လသာမြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၉ ၅-၁၁-၂၀၁၇ ဦးမျိုးသန်းဆွေ+ဒေါ်နန်းခမ်းချို မိသားစု။ အမှတ်(၁၀၄)၊ အပိုင်း(၄)၊ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ပေါက်ကုန်းတောင်ပိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၄၀ ။ ဒေါ်စန်းစန်းနှင့် စကားဝါ မိသားစု။ အမှတ်(၁၀၄)၊ အပိုင်း(၄)၊ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ပေါက်ကုန်းတောင်ပိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၁ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ဆိတ်ငြိမ် ဦးမောင်မောင်စိုး+ ဒေါ်တင်တင်ရီ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၄၂၅၊ ဧရာ(၂)လမ်း၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၂ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇ အရှင်အရိယ၀ံသ ကောင်းမှု၊ မြေနီတောင်ကျောင်းတိုက်၊ ရမ်းဗြဲမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ။ ဒေါ်သန်းမြင့်လွင် ကောင်းမှု။ အောင်မြင်ရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၄ ၁၃-၁၁-၂၀၁၇ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ ၅၈၅၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၄၅ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ဦးတင်ဝင်း မိသားစု။ အမှတ်-၄၃၊ ဓမ္မစိတ္တလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၆ ။ ဦးတင်ဝင်း မိသားစု။ အမှတ်-၄၃၊ ဓမ္မစိတ္တလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၇ ။ ဦးကျော်သူ+ဒေါ်မူမူအေး၊ သမီး-မဖူးပွင့်သူ မိသားစု။ ၁၉(က)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၈ ၁၈-၁၁-၂၀၁၇ အဖ ဦးမျိုးမင်း+အမိ ဒေါ်နီနီမျိုး အမှူးထား၍ အားထုတ်ဆဲယောဂီ ဒေါ်ခင်မျိုးအေး ကောင်းမှု။ ညောင်ဦးမြို့ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၉ ။ ဦးချစ်ခင်+ဒေါ်ရှယ်လီ၊ သမီး-ဒေါက်တာလေးလေးခင် မိသားစု။ ၈၅၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၀ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကာစီ+ဒေါ်စောသိန်း သားသမီးမြေးမြစ်တစ်စု ကောင်းမှု။ ၂၀၉၊ အထက်ပိုင်း၊ ၂-လမ်း၊ အိမ်မဲမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၅၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်သော မိဘများကို ရည်စူး၍ ဦးမြင့်ဆန်း+ဒေါ်ခင်တင့် မိသားစု။ ဒေါ်ခင်တင့် (၆၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၇)၊ ၃-လွှာ၊ အခန်း(၃/B) ၊ ၁၆၃-လမ်း၊ တာမွေ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၂ ။ နှစ်ဖက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးကျော်စွာဝင်း+ဒေါ်ဆွေရည်ရည်ထွန်း၊ သား-ကျော်တည်ကြည် မိသားစု။ အမှတ်-၄၅၆၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း အထက်၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၃ ။ နှစ်ဖက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးအောင်စည်+ဒေါ်ဘေဘီချစ်ခိုင်၊ သား- မောင်အေးရည်လင်း မိသားစု။ ဒေါ်ဘေဘီချစ်ခိုင် (၃၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ တိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၆/A)၊ ၁၆၃-လမ်း၊ တာမွေ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၄ ။ ဒေါ်ညွန့်မေ မိသားစု ကောင်းမှု။ ဗန်းမော်မြို့ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၅ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးဝင်းဆွေ အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်တိက္ခဉာဏီ ကောင်းမှု။ ၁၁၂၃/ သုဓမ္မာ-၆ လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၆ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ကိုမျိုးဇင်အောင်+မအေးအေးအောင်၊ သား-မောင်သူရဇော် မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၁၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၇ ၂၅-၁၁-၂၀၁၇ ရွှေဘုံ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဓမ္မေသီ နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ကောင်းမှု။ မုံရွာ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၈ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသိန်းဇော် မိသားစု။ ၁၀၄၊ မဟာသုခလမ်း၊ ကျီတော်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၉ ။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးကျော်ညွန့် + မိခင်ကြီး ဒေါ်လှစိန် တို့အားရည်စူး၍ ဦးဗညားရွှေ+ဒေါ်ရီရီခင်၊ မြေး- မခိုင်ခိုင်မြတ်၊ မစံထားရီ မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၈၅၊ စိန်ရတီလမ်း၊ ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆၀ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်စိန်၊ သမီး-မသင်းသင်းယု မိသားစု။ အမှတ်-၅၂၀၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ အရှေ့/ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆၁ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ ၅၈၅၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၆၂ ။ ဒေါ်ခေမာစာရီ ကောင်းမှု။ အေးမြစည်အောင် သီလရှင်ကျောင်း၊ တာချီလိတ်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆၃ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ကိုကျော်ထင် ကောင်းမှု။ ရန်ကုန်မြို့ ၁ -စုံ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်+မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေး မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၁၆၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂ ။ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား-မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၆)၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၃ ။ ဦးမျိုးညွန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင်၊ သား-ဇွဲနိုင်အောင် မိသားစု။ အမှတ်(၇၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ ၂-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်စီခိုင်လန် ကောင်းမှု။ ဖားကန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးထူး+ဒေါ်ကျော့၊ ဒေါ်ခင်နု၊ ဒေါ်ခင်ထွေး၊ ဦးတင်စိုး၊ ဦးမျိုးသန့် တို့အားရည်စူး၍ ဦးသန်းကျော်+ ဒေါ်ခင်စိုး သားသမီးမြေးတစ်စုကောင်းမှု။ ၂၇၃၁၊ အေးချမ်းသာယာလမ်း၊ အလယ်ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။ ၂၀,၀၀၀
၆ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မချိုနှင်းခင် ကောင်းမှု။ ၁၈၊ ဈေးကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၇ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု၊ လှည်းကူး။ ၁၀,၀၀၀
၈ ။ ဦးတင်ဦး+ဒေါ်သန်း မိသားစု။ ၁၆၅၊ ယုဇနလမ်း၊ စီမံကိန်း(၁)၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၉ ။ ဒေါ်တင်တင်စိန် မိသားစု။ တိုက်(၆)၊ အခန်း(၂၁)၊ ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဗဟန်း။ ၅,၀၀၀
၁၀ ၈-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်မိမိခင် (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၃၀/၁၆၇၊ တောင်ထိပ်ပန်းလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ။ ဒေါ်စန်းကြည်လှိုင်၊ သမီး-ရတနာစုစုလှိုင်၊ သား-မောင်ဟန်နိုင်အောင်၊ မောင်ဇော်လင်းအောင်၊ မြေး-နေထက်အောင်၊ လင်းကျော်ထက် မိသားစု။ ၂၃၃၆(က)၊ ဇေယျဝတီ-၅လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်မျိုးဝင်း+ဒေါ်အေးကြည် မိသားစု။ အမှတ်(၁၂)၊ အင်းယားလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။ ၂၀,၀၀၀
၁၃ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်မြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် မိသားစု။ ၅၁၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ။ ဦးထွန်းဦးကျော် ကောင်းမှု၊ ကြေးပင်ကြီးရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးကြည်မြ အားရည်စူး၍ ဒေါ်သောင်းကြည် မိသားစု။ ၉/၆၉၂၊ ရွှေပဒေသာလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးပုအိုင် (၂၄)နှစ်ပြည့်နှင့် မိခင် ဒေါ်မေပု တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးကြိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၁၁၈၁)/မြေညီ၊ သမာဓိလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ။ မောင်ဇော်ကိုကို+မစုနှင်းထွန်း ကောင်းမှု။ ပါ့သ်မြို့၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လှ မိသားစု။ အမှတ်(၇၀၇)၊ သရဖီ(၂)လမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ ၄၉၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ယာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၀ ။ ဘိုးဘွားမိဘများအား ရည်စူး၍ ဒေါ်စန်းစန်းရင် ကောင်းမှု။ ၂၄၊ လှည်းတန်း၊ လမ်းမတော်။ ၃၀,၀၀၀
၂၁ ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးတင့်လွင်+ဒေါ်မေသန်း မိသားစု။ အမှတ်- 22/L ၊ အေးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၅၀,၀၀၀
၂၂ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ကိုဋ္ဌေးအောင် ကောင်းမှု။ မြိတ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ။ ကိုကျော်မိုးလွင်+မတင်တင်လှိုင် မိသားစု။ ၂၄၃၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၄ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်စိုး မိသားစု။ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၅ ။ မိခင်ကြီး ဒေါ်မြခင် အားအမှူးထား၍ ဒေါ်နန်းကြင်ဆွေ (၅၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ၊ (၁-၁၂-၂၀၁၇) ဇီးကုန်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ။ ဒေါ်ယဉ်မေ ကောင်းမှု။ ၁၃၁၄/ ၈၈-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၅,၀၀၀
၂၇ ။ ဦးသောင်းအား ရည်စူး၍ ဒေါ်ယဉ်နု မိသားစု။ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ ၆၇- ဥက္ကာရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၂၈ ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား-မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ အမှတ်(၆)၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်။ ၁၀,၀၀၀
၂၉ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးကျော်သိန်း+မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်းလှ၊ အစ်ကိုကြီး ကိုခင်မောင်သိန်း တို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ ဦးချစ်မောင်သိန်းနှင့် မောင်နှမများ။ (၂၄၃/ခ)၊ အောင်တံခွန်လမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃၀ ။ ဦးပွင့်ကောင်း+ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ၊ သား-ဒေါက်တာ တင့်စိုးလင်း၊ သမီး- ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစု၊ ရွှေပုစွန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၅၀,၀၀၀
၃၁ ။ ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃၂ ။ မိခင်ကြီး ဒေါ်စောရီ အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်ပုည၀တီ မွေးနေ့အလှူ။ ၉၅/က၊ စိတ္တသုခလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ ၁-၁၁-၂၀၁၇ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများကောင်းမှု။ အမှတ်(၂၈)၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ၂-၁၁-၂၀၁၇ ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်း (၈၇) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ။ ၁၀၂/ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၅ ။ ဦးဇော်+ဒေါ်ပန်းနု မိသားစု၊ ဗဟန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃၆ ၄-၁၁-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါက်တာဒေါ်လှလှရီ ကောင်းမှု။ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ။ LOWRENCE BALK နှင့် DORIS LIM မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၃၈ ။ HENDRICK TAN နှင့် SUSAN LIM TAN မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၃၉ ။ STEVEN TANDI နှင့် MARY LIM မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၄၀ ။ ဦးသိန်းဦးနှင့် ဒေါ်နယ်လီရောင် မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၄၁ ။ ဦးစိန်ကြည်+ဒေါ်ဘေဘီ မိသားစု၊ ၉၃/၃၊ ၄၉-လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ ၂၀,၀၀၀
၄၂ ၅-၁၁-၂၀၁၇ ဦးမျိုးညွန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင်၊ သား-ဇွဲနိုင်အောင် မိသားစု။ ၇၉၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ။ မသီရိမြင့်ဦးသူ (၇)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၉၂/A ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၄ ၆-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်သူဇာဝင်း ကောင်းမှု။ အမှတ်(၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဦးစံဖေရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၅ ၈-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်ဆွေ မိသားစု။ အမှတ်(၃၀)၊ ၁၄၈-လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၄၆ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဝင်းတီ မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၉၄၊ ရှမ်းစု(၂)လမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့။ ၅၀,၀၀၀
၄၇ ၁၁-၁၁-၂၀၁၇ မောင်လင်းထွဋ်ဝင်း+ဒေါက်တာ နှင်းလဲ့ရည်ကျော် "မင်္ဂလာဦးအလှူ" အမှတ်-၁၈၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၈ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ ဦးမြင့်ဆွေ+ဒေါ်လှကျင်၊ သမီး-မစန်းစန်းနွယ် မိသားစု။ ၂၉၊ ၁၅-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၄၉ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ကိုယဉ်မင်းသိန်း မွေးနေ့အလှူ ၊ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၅၀ ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဥမ္မာ မွေးနေ့အလှူ (၂၄-၁၂-၂၀၁၇) ။ အခန်း(၈)၊ အဆောင်(၅၂)၊ လွှတ်တော်အိမ်ယာ၊ နေပြည်တော်။ ၁၀,၀၀၀
၅၁ ။ ဦးခင်မောင်သိန်း+ဒေါ်ဝင်းကြည်၊သား-မောင်မောင်ခိုင် မိသားစု။ ပျဉ်းမနားမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၂ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဦးတင်အောင်+ဒေါ်ချိုရူဟန် မိဘနှစ်ပါးအားအမှူးထား၍ သမီး-ဇင်မြတ်မော်၊ သား-၀င်းဝေယံ မိသားစု။ မမီမီအောင်(၃၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့် သားသား ရက်(၁၀၀)ပြည့်မွေးနေ့။ ၇၂/၉-လွှာ၊ အခန်း(၉၀၁)၊ ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် ချင်းတွင်းလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၅၃ ။ ဒေါက်တာ ရဲအောင်+ ဒေါက်တာ ကေစန္ဒီကျော် "မင်္ဂလာဦးအလှူ" ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၅၄ ။ ဒေါ်ညွန့်မေ ကောင်းမှု ၊ ဗန်းမော်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၅ ၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင် (၅၈)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၂၁)၊ သစ်ရာလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၅၆ ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှအုန်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်မြနု မိသားစု။ ၁၆၇၊ ဦးအေးလမ်းသွယ်(၆)၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅၇ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ အမှတ်-၄၉၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၈ ။ မောင်အောင်မြင့်သိန်း မွေးနေ့အလှူ ၊ သရက်မြို့၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၉ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးငွေအေး+ဒေါ်စမ်းစမ်းဦး မိသားစု။ ၅၆၅၊ ရေနံချောင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၆၀ ။ ဒေါ်စိန်ကြည် (၆၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ ၅၆၄၊ ရေနံချောင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၆၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သီလာနန္ဒာ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ယဉ်ကြည် မိသားစု။ ၅၃/၉၉၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၃၀,၀၀၀
၆၂ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများအားအမှူးထား၍ ဦးကျော်စွာလင်း+ဒေါ်ဆွေရည်ရည်ထွန်း၊ သား- ကျော်တည်ကြည် မိသားစု။ ၄၅၆(က)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၆၃ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးမောင်ထွန်း+ မိခင် ဒေါ်ကျင် တို့အားရည်စူး၍ ဦးစောထွန်းဝင်း+ဒေါ်လှ မိသားစု။ (၁၂၂)၊ ယန္တရားရိပ်သာ၊ ဘောဂဗလလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၅,၀၀၀
၆၄ ။ ဦးလှဖေ+ဒေါ်လှလှမြင့် မိသားစု။ အမှတ်-၉၇၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၆၅ ၂၅-၁၁-၂၀၁၇ ဦးစန္ဒိမာ ကောင်းမှု၊ ကြံဖိုစုကျောင်း၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၁၀,၀၀၀
၆၆ ။ ဒေါ်ပါရမီ ကောင်းမှု၊ (၁၁၉/၂၁၁)၊ ၇-လွှာ၊ လသာလမ်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၇ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသိန်းမောင်+ဒေါ်အမာ မိသားစု။ ကုန်းဇောင်းရွာ၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၈ ။ ဦးခင်မောင်မြင့်+ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း မိသားစု။ ကုန်းဇောင်းရွာ၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၉ ။ ဦးခင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်-၂၁၇၊ အခန်း-၁၄၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၇၀ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု။ ၁၀/B-2 ၊ မဂ္ဂင်လမ်း၊ ကျောက်ကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၇၁ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ အဖိုးအဖွားများနှင့် ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်စောကြည် (၁)နှစ်ပြည့်၊ ဦးတင်အောင်(၃) နှစ်ပြည့်နှင့် ဒေါ်ပြုံးကြည်(၆)လပြည့် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကောင်းမှု။ ၅၀,၀၀၀
၇၂ ။ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်စိုး ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၄၅၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၇၃ ။ ဦးကျော်+ဒေါ်ညိုအိ မိသားစု၊ မကွေးမြို့။ ၅,၀၀၀
၇၄ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ဦးအောင်နန်း+ဒေါ်မြမြဟုတ်၊ သမီး- မိခရေနန်း မိသားစု။ လန်ဒန်မြို့၊ အင်္ဂလန်။ ၅၀,၀၀၀
၇၅ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့။ ၁,၁၀,၀၀၀
၇၆ ။ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၂၀,၀၀၀
၇၇ ။ ဖေဖေ ဦးဟန်လင်းအောင်+ မေမေ ဒေါ်ဌေးဌေးလွင်၊ သား-မောင်ဉာဏ်လင်းထက် (၁၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ နန္ဒ၀န်ဈေး၊ ရုပ်ရှင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၇၈ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁,၃၀,၀၀၀
၇၉ ။ ဦးပွင့်ကောင်း+ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ၊ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစုနှင့် ရွှေပုစွန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၅၀,၀၀၀
၈၀ ။ ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်းနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁ ၄-၁၀-၂၀၁၇ မချိုနှင်းခင် ကောင်းမှု၊ အမှတ်-၁၈၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၃ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ ဦးသန်းနိုင်+ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ သမီး-မခိုင်ဇင်သန်း၊ သား-မောင်ဇော်ရဲထက် မိသားစု။ အမှတ်(၅၉)၊ ပိတောက်မြိုင်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း။ ၃,၀၀,၀၀၀
၄ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဦးကြည်ဆန်း+ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး မိသားစု။ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၃၁)၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်။ ၁၅,၀၀၀
၅ ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ ဦးနု+ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း မိသားစု၊ အမှတ်(၁၃၃၈)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ပျို(၁)လမ်း၊ အရှေ့ဒဂုံ။ ၁၁,၀၂,၆၀၀
၆ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်စိုး ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၄၅၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၇ ။ ဖခင် ဒေါက်တာ ဦးအောင်ထွန်း+မိခင် ဒေါ်မူမူကြိုင် တို့အားအမှူးထား၍ ကွယ်လွန်သူ သား-ဗိုလ်သီဟဇွဲမောင် ရည်စူးလျက် သမီး-မငုဝါအောင်၊ မဖူးပွင့် မိသားစု။ အမှတ်(၃)၊ ဆီဆုံလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၅၀,၀၀၀
၈ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ မိခင် ဒေါ်စောရီ အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်ပညာဝတီ မွေးနေ့ ။ အမှတ်-၉၅/က၊ စိတ္တသုခလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၉ ၂-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်တင်တင်မြင့် ကောင်းမှု။ (၁၁၆၀)၊ ၁၄-လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၄-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသိန်းဦးနှင့် ဒေါ်နယ်လီရောင် မိသားစု။ (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၁၁ ။ LOWRENCE BALK နှင့် DORIS LIM မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ HENDRICK TAN နှင့် SUSAN LIM TAN မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၁၃ ။ STEVEN TANDI နှင့် MARY LIM မိသားစု (AUSTRALIA) ၁၀,၀၀၀
၁၄ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးတင်ရွှေ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ဝင်း မိသားစု။ ၅၂၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ ရဲအောင်+ ဒေါက်တာ ကေစန္ဒီကျော် "မင်္ဂလာဦးအလှူ" ၊ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ သစ္စာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကာစီ+ဒေါ်စောသိန်း သားသမီးမြေးမြစ်တစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၀၉၊ အထက်ပိုင်း(၂)လမ်း၊ အိမ်မဲမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသန်းတင်+ဒေါ်မြဝေ မိသားစု။ ၆၄၊ ရေကျော်၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်စိုး ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၄၅၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၇-၁၀-၂၀၁၇ ဦးအောင်ကျော်ငြိမ်း ကောင်းမှု။ U.S.A ၅၀,၀၀၀
၂ ။ စုကျော်ငြိမ်း(ခ)စုမြတ် U.S.A ၅၀,၀၀၀
၃ ။ Shanky U.S.A ၅၀,၀၀၀
၄ ။ Imo U.S.A ၅၀,၀၀၀
၅ ။ မဏိရတ် U.S.A ၅၀,၀၀၀
၆ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ မိခင်ကြီး ဒေါ်လှမြသူ အားအမှူးထား၍ ဒေါ်အုန်းမြင့် (၄၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ မြ-အလိုင်းမင့်ခြံ၊ ဗဟန်း။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၅၀,၀၀၀
၇ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများကို ရည်စူး အမှူးထား၍ ဦးချိုလေး+ဒေါ်သောင်းထွေး မိသားစု။ ဘုရားညီကျေးရွာ၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇ ကိုကျော်ဝဏ္ဏဦး+မမွန်မွန်ထွေး မိသားစု။ အမှတ်(၁၃)၊ ရှမ်းစု(၂)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။ (၁၀)မျိုး ၃၀,၀၀၀
၉ ။ ဦးစိုးမောင်ထွန်း+ဒေါ်နန်းခင်ကြည် မိသားစု။ ၁၂၂၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ ဟိုကပ်ရပ်ကွက်၊ နမ်းခမ်းမြို့၊ ရှမ်း/မြောက်ပိုင်း။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၅၀,၀၀၀
၁၀ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် (၁၀)မျိုးအလှူ ၆၀,၀၀၀
။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၁,၅၀,၀၀၀
၁၁ ၃၁-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု။ ၃၀,၀၀၀
၁ ၅-၁၀-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်ကိုတို့အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ လှည်းကူးမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ ၅,၀၀,၀၀၀
၂ ။ ကိုခင်မောင်ထွန်း ကောင်းမှု။ အမှတ်-၈၂/၈၃၊ စွယ်တော်လမ်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၁၀,၀၀၀
၃ ၈-၁၀-၂၀၁၇ ဦးဇော်အောင်+ဒေါ်မြမြ၀င်း မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သရ၀ဏ်ရိပ်သာ(၂)လမ်း၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၄ ။ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည် (၆၀)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၈၇)၊ လမ်း-၂၀၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၅ ။ ဒေါ်ခင်ဝင်းဌေး၊ သမီး- မမေသီရိဟန် မိသားစု။ အမှတ်(၈၇)၊ လမ်း-၂၀၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၆ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ အရှင်ပညာစက္က ကောင်းမှု။ ဆိပ်ခွန်ရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့။ ၅၀,၀၀၀
၇ ။ ဦးစံဖေ+ဒေါ်အုန်းတင် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်ယဉ်လှိုင် ကောင်းမှု။ ညောင်ခါးရှေ့၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ မြစ်သားဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ါသ၀ ကောင်းမှု။ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၉ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကာစီ+ဒေါ်စောသိန်း၊ သားသမီးမြေးမြစ်တစ်စု ကောင်းမှု။ ၂၀၉၊ အထက်ပိုင်း၊ ၂-လမ်း၊ အိမ်မဲမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၂၀,၀၀၀
၁၀ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ဦးဝင်းကြည်+ဒေါ်မြလှိုင် မိသားစု။ တိုက် 6/B/E-1 ၊ အေးရိပ်မွန်(၃)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၂၀,၀၀၀
(၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းသော
၁-၁၀-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၂၅၀၀၀၀
၄-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါ်နှင်းနှင်းသန်း ဆီ ၁၀ ပိဿာ ၅၀၀၀၀
၆-၁၀-၂၀၁၇ ဦးသန်းစိုး (အကောင့်ကဲယား)
၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ဆွမ်းခံရ ဆန် ၂၄ ပြည် ၂၄၀၀၀
၂၁-၁၀-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၂၅၀၀၀၀
၂၃-၁၀-၂၀၁၇ မစ္စတာဒေါင်သီဒွိုင်း ဆန် ၇၂ ပြည် ၁၂၂၄၀၀
၂၇-၁၀-၂၀၁၇ ဒေါက်တာနေလင်းဦး မိသားစု
အောက်တိုဘာလ အတွက် စုစုပေါင်း ၇,၇၉,၄၀၀
(၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းသော
၇-၁၁-၂၀၁၇ ဦးသန်းစိုး (အကောင့်ကဲယား)
၁၁-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကေလာသ ဆပ်ပြာဆီ ၁၆ ဗူး ၉၆၀၀
၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၃၅၀၀၀၀
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ဆွမ်းခံရ ဆန် ၁၃ ပြည် ၁၃၀၀၀
၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ဦးကာစီ+ဒေါ်စောသိန်း မိသားစု ဆန် ၂၆၄ ပြည် ၂၆၄၀၀၀
၂၆-၁၁-၂၀၁၇ သစ်ရာကောက်မဟာစည် ဆီ ၁၀ ပိဿာ ၅၀၀၀၀
၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၁၀၀ ထုပ် ၇၀၀၀၀၀
၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ဦးဝိသုတ လဘက်ခြောက် ၁၀ ၃၀၀၀၀
၂၉-၁၁-၂၀၁၇ မန့်ပန်မဟာစည် လဘက်ခြောက် ၉.၅၀ ၂၈၅၀၀
၂၉-၁၁-၂၀၁၇ စေကင်းဆရာတော် လဘက်ခြောက် ၆ ၁၈၀၀၀
၂၉-၁၁-၂၀၁၇ မန်ဖူးကျောင်းတိုက် လဘက်ခြောက် ၁၁ ၃၃၀၀၀
၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ဦးအာစက္က လဘက်ခြောက် ၂၀.၅၀ ၆၁၅၀၀
၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ဓမ္မရက္ခိတမဟာစည် လဘက်ခြောက် ၇ ၂၁၀၀၀
၃၀-၁၁-၂၀၁၇ နမ့်ခမ်းမဟာစည် လဘက်ခြောက် ၁၂ ၃၆၀၀၀
၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ဦးလွယ်ထီး လဘက်ခြောက် ၁၅ ၄၅၀၀၀
၃၀-၁၁-၂၀၁၇ အရှင်ဉာဏိတ လဘက်ခြောက် ၈ ၂၄၀၀၀
နိုဝင်ဘာလ အတွက် စုစုပေါင်း ၁၇,၄၅,၈၀၀